UFC Fight Night June 26 - Atụmatụ na amụma - Stake blog - jluis37.com
Ndewo, na-alụ ọgụ Fans na anyị bụ azụ, ọzọ izu na ọzọ cracking abalị nke ọgụ na-atụ anya. Ndị agha a na-alụ ọgụ bụ ndị na-eso UFC na 2020 niile maara na ụfọdụ ndị na-ese okwu kachasị mma na-alụ ọgụ na kaadị a ma ọ bara uru itinye ya.
Kaadị a na-ebu isi site na ike iwepụ aha na oke nkewa. Mgbe ihe omume a gasịrị, anyị ga-ezumike otu izu ma gabazie na T-Mobile Arena maka Poirier McGregor Trilogy a na-atụ anya ya nke ukwuu. Isi okwu a bu agha kacha nso na obi uto nke kaadi a ka anyi banye n’ime ya!
Esemokwu dị n’ime ụlọ ahụ na-emetụ n’ahụ mgbe ndị nnukwu ibu abụọ na-ezukọ n’etiti etiti Octagon. Abụọ n’ime ndị agha na-anụ ụda nke kachasị na akwụkwọ mpịakọta ga-alụ ọgụ iji chọpụta onye na-esote ọgụ iji merie ọla edo dị arọ. Anyị na-niile ka ihe mgbawa isi ihe omume agha dị ka Ciryl “Bon Gamin” Gane ga-etinye ya undefeated ndekọ na osisi mgbe o chere ihu Alexander “Drago” Volkov.
Ciryl Gane bụ otu n’ime ndị agha nwere onyinye na naanị ndị na-ese okwu 5 na-enweghị mmeri na akwụkwọ ndekọ UFC ugbu a. Gane agafewo ule ọ bụla enyere ya ma na-ele anya na ọ ga-apụ Octagon ka ọ banyere n’ime izu a, enweghị mmeri. N’ịchịkọta 5-0 na-amalite na UFC, Gane enwetawo ihe ngosi na ya ka ọ na-ele anya ịbụ eze na-enweghị mgbagha nke ndị dị arọ. Enwetụbeghị mmeri ya na ọrụ egwuregwu egwuregwu ya, yana ihe ndekọ 7-0 Muay Thai na 8-0 MMA dị ọcha, ọ na-ele anya na kọlụm ndị na-efunahụ ya tọgbọrọ chakoo.
Gane bụ otu n’ime ndị kachasị ebu oke ibu na UFC n’akụkọ ihe mere eme, o nwere tank gas siri ike, Muay Thai na-enweghị atụ, nka nrubeisi dị egwu, na IQ ọgụ dị elu. Gane kwenyere na ọ ga – emeri ọla edo site na mkpuru ya ma merie Drago ga – ekwu okwu ọ chọrọ maka ọgụ aha ahụ.
Volkov bụ otu n’ime ndị agha Russia na-adịghị ahụkebe bụ ndị na-adabere n’ịkụgide na-emegide mgba mgba. Volkov bụ otu n’ime ndị ọkachamara na-akụ ọkpọ na UFC na ọ masịrị ndị na-agba ọgụ na-arụ ọrụ nwere arụmọrụ dị mma. Volkov meriri ndị agha UFC dịka Fabricio Werdum, Alistair Overeem, na Roy Nelson nke dị nro nke gosipụtara na ọ bụ onye mmeri n’ọkwa egwuregwu.
Volkov adaala ugboro abụọ na UFC na nchịkọta-iwepụ ọgụ megide Derrick Lewis na Curtis Blaydes, mana ọ na-eme mgbanwe ndị achọrọ ma laghachi na ike. N’ịbụ onye kụpụchara ndị iro abụọ ikpeazụ ya, ọ nwere ugbu a na-atụ egwu ọnụego 75%. O kwenyere na o meela mgbanwe iji merie aha nke na-ewepu oke 5 ma nweta mgbatị ya na-echere ogologo oge na UFC gold.
Nke a setịpụrụ ka ọ bụrụ nnukwu ọgụ dị n’etiti ndị ọgụ abụọ nwere nnukwu ọgụ IQ. Ciryl Gane bụ onye agha kachasị mma dị ka ala ya na egwuregwu egwuregwu bụ ezigbo ihe iyi egwu nye ndị iro ya, Volkov nwere ụzọ dị anya karị maka ọgụ ya. Ọ bụ ezie na Gane bụ nnukwu onye egwu, ọ ga-agwakọta ihe iji bulie aka ya elu ka Volkov bụ onye ọkpọ egwu dị egwu.
Uzo Volkov rue nmeri bu uzo agha siri ike ma di anya mgbe o tufusiri ya ka o wezuga uzo na ndi ozo. N’ihe na-adabaghị, Gane ga-elele iji ahụ ya na igba ya were kpuchie ebe dị anya ma mesịa nweta Volkov na ute. Na ngwụcha, anyị na ndị ọkacha mmasị nọ ebe a dịka ọ kwesịrị ịka mma nke ụfọdụ mgbanwe ahụ wee mechaa nwee ọganiihu na mgba mgba ya karịa oge 5.
7/10 ọgụ dị egwu anaghị ada akara kaadị onye ọka ikpe yana maka ndị na-alụ ọgụ ndị kwenyere na onye agha nwere ike ime ya n’ebe dị anya, anyị nwere nnukwu nkwalite maka gị. Ndị na – alụ ọgụ ga – enweta mmeri okpukpu abụọ ma ọ bụrụ na nhọpụta ha emee ya n’ime anya, yabụ na – akwalite ọganiihu a.
Amụma – Ciryl Gane site na Mkpebi @ 2.90 *
* Nsogbu bụ isiokwu ịgbanwe
Enwetaghị ọgụ ndị a dị ịtụnanya ma nweta nsogbu UFC kachasị mma naanị na Stake.com.